Guddoomiye Mursal “Dowladda KMG wey kasoo gudubtay balse Dastuurka wali waxaa uu ku jiraa Ku-Meel-Gaar” – Kalfadhi
Guddoomiye Mursal “Dowladda KMG wey kasoo gudubtay balse Dastuurka wali waxaa uu ku jiraa Ku-Meel-Gaar”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in laga wada-shaqeeyo sidii Dastuurka looga saari lahaa ku-meel-gaarnimadda, loogana dhigi lahaa Dastuur dhammeystiran.
Mudane Mursal, ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu kasoo gudbay ku-meel-gaarnimadda sidaasi si lamid ahna loo baahanyahay in Dastuurka uu isagana kasoo gudbo ku-meel-gaarnimadda, uuna noqdo mid rasmi ah.
“Baarlamaankii 9-aad waxaa uu Dastuurka kusoo wareejiyay Baarlamaanka 10-aad, muddada xil heynta Baarlamaanka 10-aad waxaa ay ku egtahay sannadkaan. Waxaa noo muhiimsan Dastuurka in laga shaqeeyo”.
Guddiga dib-u-eegista, la socodka iyo hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka iyo guddiga Dastuurka ee madaxa banaan, oo kulan la yeeshay guddoomiyeyaasha ayaa ku wareejiyay qormada labaad ee Dastuurka, horraantii bisha February ee sannadkan.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Gudigga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka iyo Gudigga Madaxa banaan Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa labadii sanno ee lasoo dhaafay wadday kulamo gaar-gaar ah oo ku saabsan Dastuurka iyagoona tegay xarumaha maamul-gobolleedyada dalka.
Dastuurka ayaa la filayaa in dhawaan Baarlamaanka la horgeeyo, kaddiba ay ka doodaan balse lama ogga in saameynta cudurka COVID-19 uu dib-u-dhigo filashada dhammeystirka Dastuurka ee sannadkan.
Sheekh Shariif oo sheegay in khatarta Coronavirus ee dalka Soomaaliya in ay mareyso xaalad adag